पञ्चेबाजाको करामत : उठ्न थाल्यो कर, ४ करोड रुपैयाँ संकलन « Image Khabar
पञ्चेबाजाको करामत : उठ्न थाल्यो कर, ४ करोड रुपैयाँ संकलन
Imagekhabar १६ भाद्र २०७८, बुधबार १६:२२
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर तिर्न अटेर गर्नेको घर–घरमै पुगेर बाजा बजाउन थालेपछि ४ करोड रकम संकलन भएको छ । महानगरले लामो समयदेखि कर नतिर्ने विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिको संस्था वा घरमै गई कर तिरौं भन्ने नाराका साथ गत भदौ ९ गतेबाट अभियान सुरु गरेको हो ।
महानगरले गत असार १६ गते विभिन्न ५२ व्यक्ति तथा संस्थाले लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पहिलो पटक गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेको थियो भने साउन २४ गते दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि कर तिर्न अटेर गरेपछि महानगरले घरघरमै बाजा बजाउने अभियान सुरु गरेको हो ।
बाजा बजाउन थालेपछि केही व्यक्ति तथा संस्थाले चाँडै कर तिर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामार्फत ४ करोड ५ लाख कर संकलन भइएसकेको महानगर राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कर नतिर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, नेपाल क्षयरोग केन्द्र, साझा भण्डार, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चयकोष लगायतका सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानले नै सम्पत्ति र जग्गा कर बुझाएका छैनन् । यी सरकारी संस्थानले महानगरलाई २०४९ साल यताको करोडौं रकम बुझाउन बाँकी छ ।
हालसम्म करिब ६५ करोड भन्दा बढी सम्पत्ति र जग्गा कर महानगरले उठाउन बाँकी छ । महानगरले चलाएको यो चेतावनीमूलक अभियान कतिपय संस्थाहरू आफैँ आएर आंशिक रूपमा कर बुझाउन थालेको र प्रतिवद्धता गरेका डा. अधिकारीले बताउनुभयो ।
काठमाडौं महानगरका सम्बन्धित वडा कार्यालयले यसअघि नै यी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई समयमै कर तिर्न सचेत गराए पनि नसक्ने अवस्था आएपछि महानगर आफैँले बाजा बजाउने अभियानका साथ कर उठाउन थालेको थियो । महानगरले यो सूचीमा ३ वर्ष यता कर नबुझाउने नाम समावेश गरेको छैन ।
महानगरका अनुसार विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिले राजनीतिक आडमा पनि कर नतिरेको पाइएको छ । कर छुट पाइने आश्वासनका कारण पनि कतिपय संस्थाले कर नबुझाएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले यो अभियान पछि पनि नाम सार्वजनिक भएका व्यक्ति तथा संस्थाले भदौ महिनामा कर नबुझाएमा पुनः सुचना जारी गरी सम्पत्ति रोक्का गर्ने समेत जनाएको छ ।